Yali 2018: andrandraina ny tanora malagasy - Book News Madagascar
Publié septembre 21, 2017 par Book News
“ Sehatra iray mbola mila tosika ny fanabeazana eto Madagasikara. Maro ireo tanora Malagasy no tsy afaka misitraka ny tolotra omen’ny fanjakana. Vahaolana ho azy ireo ny fahazoana vatsim-pianarana.”
Varavarana misokatra makany amin’ny fampandrosoana ny fanambeazana. Tanora Malagasy maro no maniry hisitraka izay fanambeazana izay, na eto an-toerana na any ivelany. Tsy ny rehetra anefa no afaka mahazo ny tolotra omen’ny fanjakana Malagasy. Vitsy ihany koa ireo mahavita mihaton-tena handrato fahalalana. Olana mbola mipetraka hoan’ny tanora maro eto Madagasikara aorian’ny fahafahana bakalorea. Voatery miandry ny tolotra omen’ireo firenena matanjaka araka izany ireo maniry handrato fahalalana any ivelany. Raha to aka ny fitadiavana asa, no imasoan’ireo tsy tafiditra eny amin’ny anjery manontolo eto an-toerana. Amin’izao fotoana, anisan’ny firenena misitraka ny vatsim-pianarana atolotry ny masoivoho Amerikanina, amin’ny alalan’ny programa YALI ny Malagasy. Efa misokatra ny fisoratana anarana amin’izany hoan’ireo tanora Malagasy rehetra , maniry hisitraka ity vatsim-pianarana ity. Tanora 25 taona hatramin’ny 35 taona no raisina amin’izany. Mahavoafehy ny teny anglisy, ary manohana ny ezaka ataon’ny Masoivoho Amerikanina hanamafy ny demokrasia sy hampandroso ny fivoaran’ny toe-karena eto Madagasikara. Efa misokatra ao amin’ny site www.yali.state.gov ny fisoratana anarana hoan’ny Mandela Washington Fellowship 2018. Mitohy hatramin’ny 11 octobra izao izany.
yaliNoarahabainnireo solon-tenan’ny Masoivoho Amerikanina ireo tanora nandray anjara tamin’ny Yali 2017. ©US EmbassyTsy vao izao no nanolotra vatsim-pianarana hoan’ny tanora Malagasy ny Masoivoho Amerikanina. Araka izany, mamporisika ny maintimolaly YALI, hiditra amin’ny sehatry ny fandraharahana sy famoronana asa ary ny fitantanana ny raharaham-bahoaka sy ny fitarihana olom-pirenena vanona ity Masoivoho ity. Efa tafaverina an-tanindrazana omaly rahateo ireo tanora 16 niofana tany Etazonia sy ny fandaharanasan’ny Regional Leadership Center miisa 36, izay niofana tany Pretoria sy Afrika Atsimo. Teo am-pahatongavana, nampahafantatra ny tetikasa vinavinain’izy ireo hatao ireto tanora vao nahazo fiofanana ireto. Namafisin’izy ireo ihany koa, ny faharisihany hizara izay nianarany tamin’ireo namany sy hampihatra ny asa iriany atao ho anjara birikiny amin’ny asa fampandrosoana eto Madagasikara. Tonga niarahaba azy ireo tao amin’ny Restaurant Citizien Isoraka moa ny Masoivoho Amerikanina omaly, ary nanambara ny hampisongadina ny asan’ireo maintimolaly YALI eto Madagasikara amin’ny alalan’ny tambazoatra YALI miasa am-pahavitrihana manerana ny firenena manontolo.
Antoky ny fampivoarana ny firenena iray manontolo ny fanambeazana. Tsy tokony atao ambanin-javatra ny fampianarana ho an’ny ankizy sy tanora Malagasy. Hantenaina araka izany ny hanaovan’ny fanjakana laharam-pamehana ny fijerevana akaiky ny tontolon’ny fanabeazana eto Madagasikara mba ho fampivoarana ny isam-batan’olona.
Publié dans Jeunesse, Malagasy et Social